eye diseases – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ပိုးကြောင့် မျက်တောင်ရောင်ခြင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်တောင်ရောင်တာက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်တောင်ရောင်တာမှာ အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက Staphylococcal Blepharitis ပါ။ စတပ်ဖိုင်လိုကော့ကပ်စ် ရောဂါပိုးကြောင့် မျက်တောင်ရောင်တာလို့...
ဆင်ရေယုန်မျက်စိရောဂါ (Herpes Zoster Opthalmicus)
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ရေယုန်က ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. လူတိုင်း ကျား၊ မ မရွေး ရေယုန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအားကျနေတဲ့သူတွေမှာ ရေယုန်ဖြစ်တာများပါတယ်။ Q. ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှာ...
Q. Floater အကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. မျက်စိမှန်ဘီလူးရဲ့ နောက်ဘက်မှာ Vitreous Cavity ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Vitreous အရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ မျက်စိကိုကြည့်လိုက်ရင်...
မျက်စိတစ်ခုလုံး ဖုံးအုပ်တဲ့အထိ မျက်သားတက်ရောဂါ ရသူ
Q. မျက်သားတက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိပါသလား ဆရာ။ တွေ့ကြုံဖူးရင် ဘယ်လို ကုသမှုပေးခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. မျက်သားတက်တာက မြို့နဲ့အတော်အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာတွေမှာ နေတဲ့သူတွေ အဖြစ်များပါတယ်။...
မျက်စိနှင့် ကိုယ်ခံအားစံလွဲရောဂါ (Autoimmune Disease) ဆက်စပ်မှု
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ Autoimmune Disease ရှိသူတွေမှာဘယ်လို မျက်စိပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ Autoimmune Disease ရှိသူတွေမှာ အဓိက ဖြစ်တတ်တာက...
အရက်နှင့် ဆေးလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် မျက်စိပြဿနာများ
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိပြဿနာတွေကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ ။ အရက်ကို အသင့်အတင့်ပဲ လူမှုရေးအရ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သာမန်အားဖြင့် မျက်စိမှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး။ ။ မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများကြားမှာအတွေ့ရများတဲ့ အယူအဆမှားတွေကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ။ ။ မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆတွေက လူတွေ ကြားထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေတာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက ဆရာတို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့ လူနာအများစုမှာ တွေ့ရတဲ့...